Dagaal culus ayaa xalay waxaa uu ka dhacay duleedka degmada Baraawe ee gobolka Sh/hoose kaasoo dhexmaray xoogaga Al-Shabaab iyo ciidamada huwanta.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu bilowday markii ciidamo ka tirsan Al Shabaab ay weerar culus ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin dhinaca koonfureed ee degmada Baraawe.
Shacabka Baraawe ayaa sheegay in xalay ay maqlayeen daryanka qaraxyo waaweyn iyo rasaas aad u culus oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen, iyagoo intaa ku daray in
weerarka Al-shabaab ay xalay soo qaadeen uu ahaa mid aad u abaabulnaa, maadaama waayahan weeraro noocaasi oo kale ah aysan ka dhicin Baraawe.
Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ee Baraawe ku sugan ayaa sheegay in xalay saacadu markii ay aheyd 10:00 caweysnimo ay weerar soo qaadeen xoogag ka tirsan Al-shabaab, isagoo intaasi ku daray in dagaalka uu socday muddo saacad ka badan, la iskuna adeegsaday hub kala nooc ah.
Taliyaha guutada 3aad ee ciidamada dowladda Hilowle Ciise Hagarey ayaa ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen Al-Shabaab isagoo qiray dagaalka inuu ahaa mid daran.
Hilowle wuxuu intaa ku daray in ciidamada dowladda ay eryadeen kooxihii weerarka soo qaaday, ayna khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira gaarsiiyeen.
Al-shabaab kama hadlin ilaa hadda dagaalkan, mana jiraan warar madax banaan oo sheegaya khasaaraha ka dhashay dagaalkan, balse xaalada Baraawe ayaa degan saaka iyadoo shacabku ay ay hadal hayaan dagaaladii xalay ka dhacay duleedka degmadaas.